တရားသဖြင့်စီရင်Mylène Demongeot နှင့် Sami Naceri လိမ်လည်သူဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "Mylène Demongeot နှင့် Sami Naceri တရားသူကြီးတွေလိမ်လည်သူဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်
နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, Frederic Levesque အရေးမယူအတူအများအပြားပြင်သစ်နာမည်ကြီးတွေအပါအဝင် clients များများစွာ, လိမ်လည်။ သို့သျောလညျးဂရုတစိုက်ပြန်ကြားသည်သူ၏အစီအစဉ်, သူ့ကိုတစ်ပြားမှပေးချေခဲ့ပါဘူး။ ပဲရစ်တရားရုံးမှာတနင်္လာနေ့ 16 စက်တင်ဘာလအပေါ်စစ်ကြောစီရင် "ယုံကြည်မှုဖောက်ဖျက်", "အယူမှား" နှင့် "လိမ်လည်မှု"အဆိုပါဘဏ်လုပ်ငန်းရှင် 49 နှစ် 2012 သည်အထိ embezzling ကျော်ငါးသန်းသံသယဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအနည်းလမ်းကို: ယင်း၏အချမ်းသာဆုံးဖောက်သည်များ၏ဘဏ်စာရင်းသို့ကျဆင်းလာ လည်းကံကောင်းစဉ်သစ်ကိုဖောက်သည်ဆွဲဆောင်ရန်.
ဆက်စပ်အဖြစ် သည် Le Parisienဖရက်ဒရစ် Levesque ခဲ့သူတစ်ဦးအကြီးအညွှန်ကြားရေးမှူးများကချဉ်းကပ်လာသောအခါအဆိုပါ Machiavellian အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည် နှစ်ခုယူရိုသန်းရှာကြံ မိမိအအနာဂတ်ရုပ်ရှင်ကားရိုက်ကူးခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအဘို့။ သူ့ကိုကူညီဖို့, ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တထောင်တရာအနည်းငယ်ယူရိုပျောက်ကွယ်သွားပြီသဘောပေါက်ကြဘူးအကောင့်ရာသည်၎င်း၏သည်အခြားချမ်းသာတဲ့ clients များ၏အကောင့်အတွက်အစေခံရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါရိုက်တာ အလက်ဇန်းဒါး Arcady သားကောင်များတစ်ခုဖြစ်သည်: အဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်, သူဟာခဲ့ "အရည်အချင်းနှင့်ကောင်းတဲ့"လည်း 300 000 ယူရိုသူ့ကိုစင်ကြယ်သောမေတ္တာပေးဆောင်ခဲ့ ... သူသည်နောက်တဖန်အမျိုးမျိုးကတခြားအကောင့်ယူလိုက်တယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးစေရန်, ဖရက်ဒရစ် Levesque သူထားဘယ်တော့မှသေချာသည်, မိမိအစီအစဉ်ဝန်ခံ သူ့အိတ်ကပ်ထဲမှာတစ်ပြားမှ : သူ့ရည်မှန်းချက်ရိုးရိုးသစ်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝ clients များဆွဲဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ အဆိုပါဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်အပါအဝင် Scan ကို၏နှစ်ပေါင်းများစွာခုနှစ်တွင်သူသန်းပေါင်းများစွာယူရိုခိုးယူသူကိုမိုက်ကယ်အမည်ရှိချမ်းသာကြွယ်ဝပြည်ပရှိ၏ကိုယ်စားတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးမှာ Frederic Levesque အမြဲအသေးစား paris, defrauds ကြောင်းဖောက်သည်ပြန်ဆပ်ဖို့စီမံခန့်ခွဲလျှင် တဖြည်းဖြည်း၎င်း၏အရှုံးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ.
ကြောင်းဖရက်ဒရစ် Levesque အကူအညီသူ့ကိုမရှိတော့နိုင်ဖောက်သည်ထအပ်ချုပ် နက္ခတ္တဗေဒခု၏ပေးဆောင် သူကသူတို့ကိုငှါး။ အဆိုပါသံသရာပဲစတင်ကြောင်းနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်သူယခင်ကမှုတ်ဖူးသောသူတို့ကိုဖြည့်ဖို့တခြားအကောင့်များမှပိုက်ဆံယူခိုင်းသည်။ ကိုးကားသားကောင်များများထဲတွင်: Sami Naceri, ပါတီများဒါပေမယ့်လည်းမင်းသမီးဖြစ်ဖို့ငြင်းဆန်သူကားအဘယ်သူ Mylène Demongeotနှင့်သရုပ်ဆောင် Olivier Martinez။ အဆိုပါတရားခွင် 25 စက်တင်ဘာလသည်အထိဆက်လက်။
ဆရာသောရုပ်ရှင်တင်ဆက်ဖို့မော်စကိုပြင်သစ်သရုပ်ဆောင် Sami Naceri သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ